क्याप्सन भिडियोफोन खरीद गर्नुहोस् - Konnekt
क्याप्सन भिडियोफोन मूल्य निर्धारण
श्रवण कमजोरीले तपाईंको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्न नदिनुहोस्, समुदाय वा रोजगार सुरक्षामा जडान गर्नुहोस्।
वा हाम्रो नियमितको बारेमा सिक्नुहोस् Konnekt भिडियोफोन मूल्य निर्धारण.
फेस मास्कले अनुहारको भाव लुकाउँछ। ओठको पठन असम्भव छ।
Konnekt द्वारा प्रभावित परिवार र हेरचाह प्रदायकहरूबाट बढ्दो मागको अनुभव गरिरहेको छ COVID-19 लकडाउन.
क्याप्सन भिडियोफोन सहयोग गर्न सकिन्छ…
उपचार नगरेको सुनुवाई घाटा एकाकीपनसँग जोडिएको छ, निराशा र बिग्रिएको मेमोरी.
को जोखिम dementia गम्भीर बिरामी सुन्नेसँग पाँच गुणा खराब छ।
ग्रेगको क्याप्शनिंग भिडियोफोनले उसलाई ओठहरू पढ्न, उपशीर्षकहरू हेर्न र साथीहरू र परिवार प्रायः हेर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
के तिमीले संघर्ष डाक्टरलाई बोलाउने हो?
के तिमी चिन्ता गर्नुहोस् आपतकालको बारेमा?
शिमोनको घरमा एक्लै हुँदा एउटा दुर्घटना भयो। उसले बटनको टचमा मद्दतको लागि कल गर्न सक्षम भयो। क्याप्शनहरूले छिटो सहि सल्लाहहरू पाउनको लागि यसलाई छिटो बनाउँदछ।
हाकिमहरूले कार्यस्थल समायोजन गर्ने जिम्मेवारी छ कि एक कर्मचारी एउटा असक्षम प्रभावकारी हुन सक्छ।
त्यसो गर्न असफलता भेदभावको मात्रामा पर्छ।
प्रबन्धक एम्माले तालियालाई क्याप्शन भिडियो भिडियो प्रदान गर्‍यो। तालियालाई मूल्यवान र सफल महसुस हुन्छ।
प्रति दिन एक कप कफी भन्दा कम। भिडियोको साथ र बिना दुवै प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न के यसको लायक छ? यहाँ सोध्नुहोस्
तपाईंको वितरण ठेगाना र आवश्यकताहरूको लागि उद्धरणको लागि तल हाम्रो फारम प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ सोध्नुहोस्
तपाईं अशक्तता कोष, कार्यस्थल कोष, वा घर हेरचाह कोषको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। कोसिस गर्नुहोस्, भाँडामा लिनुहोस् वा थोरै वा बाहिरको जेकेट लागतको साथ खरीद गर्नुहोस्। हामीलाई कल गर्नुहोस् वा तल सोध्नुहोस्।
विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध छ अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोप, अफ्रिका, जापान र एशिया सहित।
फारम आईडी: ५,, फाराम नाम: क्याप्शन फोन को बारे मा अधिक जान्नुहोस्, पोस्ट/पृष्ठ आईडी: 57,, पोस्ट/पृष्ठ शीर्षक: क्याप्शन भिडियोफोन, मिति (dmy): १//०7978/२०११, प्रयोगकर्ता आईपी ठेगाना: २४००: b27: :: ३, एम्बेड यूआरएल: https: // www।konnekt.com.au / खरीद-क्याप्शन-भिडियोफोन /, HTTP रेफरर URL:
हाम्रो भिडियो हेर्नुहोस् वा यस बारे मा अधिक पढ्नुहोस् Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन कसरी हेर्न अविश्वसनीय सजिलो यो प्रयोग गर्नु हो।